Excel အကြောင်းလေးပြောကြည့်ရအောင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
25-07-2008, 10:53 AM
ပို့စ် 23 ခုအတွက် 78 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
shortcut key လေးတွေကိုလဲသိစေချင်လို့ပါ
Bold တင်ချင်ရင် Ctrl+b
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ နေရည် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဟိန်းသူအောင်, တောဂေါ်လီ, မောင်သံသရာ, အေးသက်မွန်, နွေဦးကံကော်, Kyaw Zin Hein, linthuraaung, Mg kyaw problemboy, minthumon, phoetharlay, phyuphyukyaw, PoePoe47, tm4592, whiteman
Find More Posts by နေရည်
25-07-2008, 06:54 PM
တည်နေရာ: Near the Star
ပို့စ် 144 ခုအတွက် 466 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ akm အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တည်နေရာ: ခု မန္တလေးမြို့မ&
ပို့စ် 190 ခုအတွက် 744 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ဘဲ အော်အော်.
Excel မှာ အရေးအကြီးဆုံးတကာ့ အရေးအကြီးဆုံး သိထားသင့်တာကတော့
Ctrl + 1 ပါတဲ့
မောင်သံသရာ, အေးသက်မွန်, chitnyimalay, minthumon, phoetharlay, phyuphyukyaw, Starfire
13-09-2008, 04:33 PM
Ctrl+c isn't copy??
if so how to center
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ minthike အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, အေးသက်မွန်
excel မှာ .. ctrl+1 ကတော်တော်လေးအရေးပါပါတယ်..
ဒီကီးလေးတစ်ခုရှိယုံနဲ့ အသုံးတဲ့ပါတယ်..cell တစ်ခုထဲမှာ
ဒီ shortcut လေးက လွယ်ကူလျင်မြန်ပါတယ်..
နောက်တစ်ခု အရေးပါတာက ..merge cell လုပ်ပြီးသား cell ထဲမှာ
စတန်းရှည်ရှည်ရိုက်ရတော့မှာမို့ လို့ ...စာတန်းခေါက်ပြီး ရိုက်ချင်ရင်တော့
Alt + Enter နှိပ်ပြီးရိုက်နိုင်ပါတယ်..
စာရိုက်ရာမှာလဲ ...cell ကွက်လေးတွေက သေးနေတယ်ဆိုရင်..ရော..
ဒါက လွယ်ပါတယ်...cell အားလုံးကို select ပေး..ဘေးဘောင်လေးပေါ်မှာ
Right Click လုပ်ပြီး...Row Hight မှာ 20 ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်..ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့
နောက်တစ်ခုကတော့ ..ရက်စွဲတွေမှာ (-)လေးတွေ ရိုက်ရပါတယ်..
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ..သာမန် သုံးဆင့် လေးဆင့် ဇယားကွက်တွေကို
Last edited by maJunior; 15-09-2008 at 12:43 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပျားဖယောင်း, ရှမ်းမလေး, အလွမ်းမင်းသား, စောထွန်းဝင်း, တောဂေါ်လီ, မောင်သံသရာ, ရွှေမှုန်ခြယ်, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, အေးသက်မွန်, aung myint, kokomaung.ko28, layapecho, Mg kyaw problemboy, minthumon, naynayz, phyuphyukyaw, Starfire, tm4592, whiteman
17-09-2008, 11:07 AM
ပို့စ် 108 ခုအတွက် 363 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Excel မှာ cells တစ်ခုနဲ့ cells တစ်ခု ပေါင်းချင်ရင်..
A2 နဲ့ B2 နေရာမှာ ကိုယ်ပေါင်းချင်တဲ့ cells နာမည်လေး ထည့်ပေးရုံပါပဲ..
main key ကတော့ ကိုယ်ပေါင်းချင်တဲ့ cells ကြားထဲမှာ &" "& လေးထည့်လိုက်တာပါပဲ...
Last edited by moekyal; 17-09-2008 at 11:18 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ moekyal အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မစန္ဒာထူး, မောင်သံသရာ, ၀သုန်အောင်, layapecho, minthumon, naynayz, shinthantnyein, tm4592
Visit moekyal's homepage!
Find More Posts by moekyal
18-09-2008, 10:31 AM
excel မှာ ဇယားတစ်ခုကို အဆင်ပြေပြေရိုက်နိုင်ဖို့အတွက်
တချို့ shortcut လေးတွေလဲ သိရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်..
ဂျူနီယာ သိတာလေးတွေကို ထပ်ပြီးဝေမျှပေးပါမယ်..
အပိုင်းဂဏန်းလေးတွေရိုက်ရင်..တချို့ excel မှာ အဆင်မပြေပါဘူး
ဒီတော့ ..အပိုင်းဂဏန်း မရိုက်ခင်မှာ ရှေ့က (0) ကို ခံပြီးရိုက်ပါ။
တချို့စက်တွေမှာ အနှုတ်လက္ခဏာလေးရိုက်လို့မရတာ ဖြစ်တတ်
ပါတယ်..ရက်စွဲလေးတွေမှာ..အဲဒီ (-) လေးကို လိုအပ်လာပြီ..
ဆိုရင်တော့.. - လေးမရိုက်ခင်ရှေ့က ဒ လေးခံပြီးရိုက်ရင်
ဂဏန်းများကို အတွက်အချက်မသုံးဘဲ ရိုးရိုးဂဏန်းတွေ ဖြည့်ထည့်
တခါတလေမှာဇယားမှာ cell width ကျော်ပြီးရိုက်ထားလို့
#### ဒီလိုလေးတွေ ပေါ်နေပြီဆိုပါတော့..အဲဒါဆိုရင်တော့
cell ရဲ့ ညာဘက်ဘောင်ကို right Click လုပ်လိုက်ရင်
cell width အလိုလို ကျယ်သွားပါလိမ့်မယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရှင်းလေး, စောထွန်းဝင်း, မောင်သံသရာ, အေးသက်မွန်, မြတ်နိုးမေ, ၀သုန်အောင်, Aye Chan Thu, kokomaung.ko28, layapecho, linthuraaung, minthumon, phyuphyukyaw, shinthantnyein, Starfire
28-10-2008, 03:00 PM
ပို့စ် 133 ခုအတွက် 373 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Excel မှာ ဂဏာန်းများကို အလိုအလျှောက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်.......
ကိုပေါင်းထည့်ချင်တဲ့အကွက်လေးထဲမှာ =Sum( ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့
ကိုပေါင်းချင်သော ဂဏာန်းများကို select လိုက်ပေးလိုက်ပါ........
တကွက်ခြား နှစ်ကွက်ခြားပေါင်းခြင်တယ်ဆိုရင်တော့ Ctrl ကီးကို နှိပ်ပြီးတော့ Select ပေးရပါမည်........
Select ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ Enter ကီးကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ..........
မိမိ ပေါင်းချင်တဲ့ ဂဏာန်းများကို အလိုအလျှောက် ပေါင်းပေးသွားပါလိမ့်မည်.......
အားလုံးပဲ ဗဟုသုတများစွာ တိုပွားနိုင်ကြပါစေ....
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ moeyetkh အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, ရွှေမှုန်ခြယ်, အောင်မင်းကို, အေးသက်မွန်, aung myint, kokomaung.ko28, kyawswarl, minthumon, phyuphyukyaw, shinthantnyein, Starfire, ukjoes, whiteman
Find More Posts by moeyetkh
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် exel အကြောင်းကို သေချာလေး ဆွေးနွေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာတော့ မြန်မာလိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိပါတယ်။ ဆရာဦးအောင်မြင့်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ အခြေခံက စပြီးလေ့လာလိုသူများအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။ exel ကို အသုံးချရတာ တော်တော်ကို လွယ်ကူရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ကျွန်တော်စကင်ဖတ်ပြီးတင်ပေးပါ့မယ်။ နည်းနည်းတော့ စောင့်ကြပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ နုမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, Aye Chan Thu, minthumon, moemoehtike, phyuphyukyaw
ပို့စ် 245 ခုအတွက် 522 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီမှာ ကျွန်တော့် တို့ အစ်ကိုတစ်ယောက်
မသိသေး တဲ့သူတွေအတွက်ပါ ။
၀င်ကြည့်လိုက်ပါ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး ။
အား ငယ် နေစဉ်မှာ..
ကိုယ် ချင်း စာ နှစ်သိမ့်အားပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ bunny အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
15-11-2008, 09:56 PM
ပို့စ် 190 ခုအတွက် 542 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
နွေလည်းသိတာလည်းပြောမယ်နော် insert - picture -from file ထဲက
ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိတဲ့ ပုံတွေကိုချလို့ရတယ်။
ကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးပြီ Insert နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ excel စာရွက်ပေါ် ပုံပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ngwe oo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, အေးသက်မွန်, kyawswarl, minthumon, naynayz, phyuphyukyaw
ngwe oo ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by ngwe oo
excel ထဲမှာ နံပါတ်အစဉ်လိုက်ရိုက်ချင်ရင် လက်ညောင်းခံစရာမလိုပါဘူး။
အရင်ဦးဆုံး A1 မှာ 1 ကိုရိုက် ပြီးရင် ထောင့်ကနေ ctrl ဖိပြီး လိုချင်သလောက်နံပါတ်စဉ်အထိဆွဲသွားလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် လက်မညောင်းဘဲ နံပါတ်စီပြီးသား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ngwe oo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, အေးသက်မွန်, minthumon, naynayz
ပို့စ် 329 ခုအတွက် 829 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
excel နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုမျိုးဝိုင်းပြောပြပေးကြတာ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးတို့ လို ဘာမှနားမလည် သေးတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ဘယ်နားကိုသွားပြီးဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိသေးတာ ခက်ပါတယ်..ကီးတွေကို သိနေရင် တောင် အဲ့ဒီ excel စာမျက်နှာကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို တဆင့်ခြင်းစီ အခြေခံကနေစပြီး ဥပမာ ပုံများ ဖြင့် ရှင်းပြပေးစေ လိုပါတယ်၊ excel ကိုအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် တတ်လဲတတ်ချင်ပါတယ်..ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ပေးစေလိုပါတယ်..
[SIZE="3"][COLOR="Purple"][B]ထာဝစဉ်ပေးလို့ မကုန်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာဟာ အချစ် ပါပဲ။[/B][/COLOR][/SIZE]
[COLOR="DarkGreen"][B]ခွင့်လွတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော လက်စားခြေခြင်းဖြစ်၏[/B][/COLOR] :16:
[B][SIZE="2"][COLOR="Purple"] "Knowledge is virtue"[/COLOR][/SIZE][/B]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ moemoehtike အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit moemoehtike's homepage!
Find More Posts by moemoehtike
22-11-2008, 03:26 AM
Excel ကို စတင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Sheet တွေဟာ သုံးခုပဲတက်လာပါတယ်..
Sheet ဆိုတာမှာ စာမျက်နှာအရေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်......
Excel ရဲ့ အောက်ဆုံးနားမှာ Sheet1, Sheet2. Sheet3 ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်..
တကယ်လို့ ကိုယ်က Excel ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Sheet ကလေးတွေ များများတက်လာအောင် ပြင်ထားကြမယ်ဗျာ.....
Sheet လေးတွေကို ကိုယ် Excel ဖိုင်ကို စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ငါးမျက်နှာတက်စေချင်ပါသလား..
ဒါမှမဟုတ် စာမျက်နှာ ၁၀၀ ထက်တက်စေချင်ပါသလား...
မိမိ တက်စေချင်သလောက်ကို Excel စဖွင့်တာနဲ့ တက်လာပါလိမ့်မယ်...
Excel menu bar က tool ကို click ထောက်လိုက်ပါ ပြီးသွားရင်တော့ tool box ထဲက option ကိုရွေးလိုက်ပါ option box ကျလာပါလိမ့်မယ် option box က General ကိုရွေးလိုက်ပါ General ထဲမှာ Sheets in new workbook box ရဲ့ နံပါတ်စဉ်နေရာမှာ မိမိ လိုချင်တဲ့ Sheet အရအတွက်အတွက်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ...
(ဥပမာ-Excel စဖွင့်တာနဲ့ Sheet ငါးမျက်နှာလိုချင်တယ် ဆိုရင်နံပါတ်5ကို ရိုက်ထားလိုက်ပါ မိမိ လိုချင်သလောက် ရိုက်ထားလို့ရပါတယ်...)
အဲဒါဆိုရင်တော့ မိမိ Excel ကို စဖွင့် လိုက်တာနဲ့ အဲဒီမှာ ရိုက်ထားသော ဂဏာန်းအရေအတွက် အတိုင်းအမြဲတမ်း Sheet စာမျက်နှာများများနဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ်..
(မှတ်ချက်-Sheet အရေအတွက် ၁ ကနေပြီးတော့ ၂၅၅ အထိပဲရိုက်လို့ရပါတယ်.. အဲဒီထက်ပိုပြီးတော့ ရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ...)
တလက်စတည်းဗျာ option ရဲ့ General box မှာပဲ နောက်တစ်နည်းပြောပြပါဦးမယ်......
Excel စာမျက်နှာရဲ့ အပေါ်ဆုံး Row မှာ အင်္ဂလိပ်သင်္ကေတ ဖြစ်တဲ့ A,B,C လို့ပြထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်... အဲဒီ Row က A.B.C လေးတွေကို 1.2.3 ဆိုပြီးတော့ Row သင်္ကေတလေးတွေ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် General box ရဲ့ Setting ထဲမှာ R1C! feference style ဆိုတာလေးရှိပါတယ်... အဲဒီမှာ အမှန်ခြစ်ကလေးထည့်ပေးလိုက်ပါက မိမိ Excel ရဲ့ Row သင်္ကေတနေရာလေးမှာ 1,2,3 ဆိုပြီးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ.... A,B,C ဆိုပြိးပြန်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမှန်ခြစ်ကလေး ကို ပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာ.....
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ moeyetkh အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စိုးလင်း(၁), တောဂေါ်လီ, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, အေးသက်မွန်, konaythway, maJunior, Mg kyaw problemboy, minthumon, naynayz, Starfire
28-11-2008, 06:18 PM
ဟဲဟဲ ကျွန်တော် သိတာကတော့ excel မှာ ctrl+s က save လုပ်တာဗျ ၊ ဖိုင်တွေကို သိမ်းထားလို့ရတယ်လေ၊ဟဲဟဲ
အော်....... ctrl+shift+s ကျတော့ save as လုပ်လို့မရဘူးဗျ ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး ၊ ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပေးတာပါ ဟီဟီး
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ blackNwhite အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
30-11-2008, 04:11 PM
Excel မှာ data တွေကို Select မှတ်ပြီး Drag ဆွဲတဲ့အခါမှာ Plus Icon ပုံကနေမြှားပုံစံလေးမပြောင်းသွားဘူးဆိုရင် Tool--->option----->Edit tab---->setting အောက်က Allow cell drag and drop check box လေးကို check လုပ်လိုက်ရင်အိုကေပြီ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ နှင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, အေးသက်မွန်, minthumon, naynayz
30-11-2008, 04:31 PM
Excel မှာ Data တွေထည့်ထားတဲ့ Row တွေ column တွေအရမ်းများလ&
ဖျောက်ချင်တဲ့ Row (or ) Column ပေါ်မှာ Right click ---->hide ကိုရွေးလိုက်ရင်ရပါပြီ
ပြန်ခေါ်ချင်ရင် Unhide ပေါ့ဟုတ်ဘူးလား အိုကေတယ်နော်
မောင်သံသရာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, အေးသက်မွန်, ၀သုန်အောင်, kyawswarl, minthumon, naynayz
Excel မှာ Auto filter လုပ်ရအောင်လေ
စမယ်နော် List ထဲက cell တစ်ခုပေါ်ကို caser ချပါ Data ---->Filter---->Autofilter လုပ်လိုက်ရင် Field name တွေမှာ dropdown arrow တွေပေါ်လာမယ် ကြည့်မယ့် amount column က dropdown arrow လေးကို click လုပ်ပြီး Non-blank ကိုရွေးမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ရောင်းအားကိုပဲ Excel ကဖေါ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ နှင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Excel မှာ row or column ကိုထပ်တိုးချင်ရင်
row or column ပေါ်မှာ Right click ---->Insert ဆိုရင်ရပြီ
အင်းဗျာ အကို တို့အစ်မတို့တစ်တွေက Excel အကြောင်းလေးတွေရေးသားကြတော့ကျွန်တော်လည်းရေးချင်တယ် ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က အခုမှ စတင်လေ့လာနေတဲ့သူဆိုတော့ ကျွန်တော့်သိထားမှုလေးတွေက ပြည့်စုံမှုတော့မရှိ သေးပါဘူး။သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်သိသောအသိကလေးများဖြင့်ပညာဒါနလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ.
Microsoft Excel 2002 သည် Microsoft Office XP အုပ်စုတွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။စာရင်းဇယားများ ရေးဆွဲ ခြင်း Data များကို ဇယားတွင်ဖြည့်စွတ်၍ Chart ဂ၇ပ်ပုံ အမျိုးမျိုးဖန်တီးခြင်း ၊ Database management ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနှင့် သင်္ချာပုစ္ဆာများကို လျှင်မြန်စွာ တွက်ချက်နိုင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Microsoft Excel Window တွင် Title Bar၊Menu Bar၊ Standard Tool Bar၊ Formatting Tool bar၊ Formula Bar နှင့် Status Bar တို့ပါဝင်ပြီး Workbook Window တွင် Column Heading၊ Row Heading၊ Vertical Scroll Bar? Horizontal Scroll Bar၊ Tab Scrolling Button နှင့် Sheet 1 ၊ Sheet2၊Sheet3တို့ကိုတွေ့ရပါမည်။ MicrosoftExcel Window ၏ Title Bar တွင် Microsoft Excel-Book 1 ဟုဖော်ပြပေးနိုင် ပါသည်။ Book 1 သည် Workbook တစ်ခုဖြစ်ပြီး Sheet 1သည် Active Sheet ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါ သည်။ အခုကျွန်တော်ရေးသားသော အကြောင်းအရာကလေးသည် Excel တစ်ခုအတွက် သိသင့်သော အခြေခံတူးကလေးများဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသော ကျွန်တော်သိသော အပိုင်းကလေးများကိုလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေး သွားပါမည်။ အားလုံးကိုခင်မင်တတ်သူ တောသားလေး..........
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, မေလေးငယ်, ၀သုန်အောင်, minthumon, nay nyo yi, tu tu
Workbook သည် Worksheetsများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Excel ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Workbook တစ်ခုတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် Worksheet (3) ခုရှိပါသည်။လိုအပ်ပါက
Worksheets များကိုအောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
(က) Tools menu ကို Click လုပ်ပါကPull down menu တစ်ခုကျလာပါမည်။
(ခ) Options commandကို Click လုပ်ပါက Options dialog boxပေါ်လာမည်။
(ဂ) General tab ကို Click လုပ်ပါက Sheets in new workbookမှ Sheet
အရေအတွက်ကို (၁)ခုမှ (၂၅၅)ခုအထိ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးလျှင်
OK ကို Click လုပ်ပါ။
၅။ Excel Worksheet တစ်ခုတွင် Column များကို A, B, C, ..., Z, AA, AB, ..., IV
အထိဖော်ပြပြီး Columnsစုစုပေါင်း(၂၅၆ )ခုရှိပါတယ်။ Row များကို 1, 2, 3, ... , 65536
အထိဖော်ပြပြီး; Rowsစုစုပေါင်း (၆၅၅၃၆)ခုရှိပါတယ်။စုစုပေါင်း Cell အရေအတွက် (17)
သန်းနီးပါးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Cellဆိုသည်မှာ Column တစ်ခုနှင့် Row တစ်ခုဖြတ်နေသည့်
ဆုံချက်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ- Cell E10 ဟုဆိုလျှင် Column E နှင့် Row 10 တို့ဆုံသော
Cell တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Cell တစ်ခုကို Selectလုပ်လိုပါက ထို Cell လေးထောင့်ကွက်မျဉ်းအထူဖြစ်သွားပါမည်။
၎င်းလေးထောင့်ကွက် မျဉ်းအထူကို Selector လို့ခေါ်ပါတယ်။
Selector ရှိနေသော cell ကို Active cell လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သိသော အသိ မှီသောဥာဏ်ကလေးနှင့် ဖတ်မှတ်ထားသောစာကလေးများစုပေါင်းပြီး ဒီအကြောင်းအ၇ာက လေးကိုရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။ကျွန်တော်ေ၇းသားသေား အကြောင်းအရာကလေးက အားလုံးအတွက် တစ်စုံ တစ်ခုတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်မျာ ..အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားတတ်သူလေး..တောသားလေး....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, minthumon, tu tu
Excel မှာ row and column တွေထပ်တိုးချင်ရင်တိုးချင်တဲ့row and column ပေါ်မှာ Right click ----->Insert ဆိုရင်ရပါပြီ
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ နှင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, minthumon, phoetharlay
Originally Posted by နုမောင်
စာအုပ် ဇစ်ဖိုင်လေးနဲ့ တင်ပေးပါလား ကျေးဇူးပြုပြီ တောင်းဆိုတာပါ ...အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပေါ့ ...
ကျွန်တော်က အခုမှစတင်လေ့လာသူပါ ....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
14-12-2008, 06:57 PM
ဇယားများနဲ့ ရုံးစာရိုက်တဲ့အခါ ဇယားတွေမှာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ သင်္ကေတအတွက် (-)ကိုသုံးပြီးရင်
tab ခလုတ်လေးမဟုတ်ရင် arrow key တွေကို သုံးလိုရပါတယ်ခင်ဗျာ
Last edited by စိုးလင်း(၁); 14-12-2008 at 07:00 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ စိုးလင်း(၁) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စိုးလေး, မောင်သံသရာ, minthumon
Find More Posts by စိုးလင်း(၁)
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ခexel အကြောင်းကို သေချာလေး ဆွေးနွေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာတော့ မြန်မာလိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိပါတယ်။ ဆရာဦးအောင်မြင့်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ အခြေခံက စပြီးလေ့လာလိုသူများအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။ exel ကို အသုံးချရတာ တော်တော်ကို လွယ်ကူရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ကျွန်တော်စကင်ဖတ်ပြီးတင်ပေးပါ့မယ်။ နည်းနည်းတော့ စောင့်ကြပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုနုမောင်...သမီးက exel ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ် ဒါပေမယ့် အခြေခံမရှိတော့ လေ့လာ ရတာ အရမ်းကိုခက်ခဲနေတာပါ..အခုလို အခြေခံကစပြီးလေ့လာလို့ ရတဲ့စာအုပ်လေး ကို တင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့
သမီးတို့ လို လူတွေအားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်......စောင့်နေပါ့မယ်နော်......အမြန်ဆုံးလေးတော့ တင်ပေး စေလို ပါတယ်.. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ moemoehtike အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
22-12-2008, 03:39 PM
The Best Shortcut Keys in Microsoft Excel;
ကိုတင့်, ချစ်သမီး, မောင်သံသရာ, minthumon
ကျောင်းသား တွေအတွက် equation ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ မသိသေးသူတွေ အတွက်ပါ လွယ်လွယ်လေးပါ တကယ်လဲကြုံရော အသုံးမချတတ်မှာစိုးလို့ တင်ပေးတာပါ
x=0 to 100
ဘာမှမခက်ပါဘူး A နေရာမှာ0to 100 ကို ဆွဲချလိုက်ပါ။B နေရာမှာ စတွက်မယ်ဗျာ formula နေရာလေးမှာ
=23*A1^4-5*A1^3+8*A1^2+10*A1-20 ဆိုပြီ Enter သာရိုက်လိုက်တော့ အဖြေရလာပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် ၁၀၀ ထိဆွဲချလိုက် ဒါဆို သူခိုင်းတာပြီးပြီ ဂရပ်ဆွဲခိုင်းရင်တော့ insert ကိုသွား သူဆွဲခိုင်းတဲ့ ဂရပ် ကိုရှာပြီး click ပေးလိုက်ပါ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ ရပါပြီ... ဒါကတော့ ကျွန်တော်ဘာမှ မဟုတ်ပဲ ပွဲပျက်ခဲ့တဲ့ စာမေးပွဲခန်းထဲကပုဒ်စာ တစ်ပုဒ်ပါ သိပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်...
ကျောင်းကပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း Excel အကြောင်းဆွေးနွေးထားတာတွေ့လို့ ၀င်ဆွေးနွေးတာပါ ...
Last edited by ဒဿဂီရိ; 22-12-2008 at 04:28 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဒဿဂီရိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, မောင်သံသရာ, kyawswarl, Ma Ei
Originally Posted by နေရည်
်font ကို မောက်စ်မကိုင်ဘဲသွားချင်ရင် ctrl+shift+f
size ကို ctrl+shift+p
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မောင်မိုးသီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မောင်မိုးသီး
24-12-2008, 12:53 PM
Excel ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ formula Tool တွေအကြောင်းကို သိထားသင့်တယ်နော်
င်္formula Tool and Allow key များအကြောင်းကိုတော့ သိထားသလောက်ပြောပြခြင်းပါတယ်။
အပေါင်းသင်္ကေတများသာဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံး လက္ခဏာက စလပ်ပေးတဲ့နေရာမှာသုံးတာပါ။
အလတ်စားကတောမျှားပုံလေးဘက်ပါတဲ့ ပုံပါ။ ရွှေ့တဲ့နေရာမှသုံးတာပါ။
စလပ်ပေးထားတဲ့ထောင်နားက အပေါင်းသင်္ကေတပုံက တော့ Formula အနေနဲ့ copy ကနေစပြီး Number အလိုက်တူညီမှုကို ပြဖို့ ဆွဲချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
အားလုံး နားလည်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ စိုးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းသွေး, မောင်သံသရာ, linthuraaung, pannuko, phyulayswe07